कांग्रेस छाडेर एमालेमा गएकाे भन्दै विजयकुमार गच्छदारका कार्यकर्ताद्वारा कुटपिट - Action Khabar - Nepali Online News Portal
सुनसरी । नेपाली कांग्रेस सत्तामा गएसँगै सुनसरी क्षेत्र नं. ३ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपी विजयकुमार गच्छदारको ‘दवदवा’ सुरु भएको छ । शुक्रबार राति बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा गच्छदारका कार्यकर्ताहरुले भर्खरै नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका युवाहरु तथा स्थानीयहरुलाई कुटपिट गरेका छन् ।
गच्छदारका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले केही दिन अगाडी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य पार्टी परीत्याग गरि नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका १५० जना युवाहरुसँग रिसिइवी साँध्न गाउँघरमा आतंक मच्चाइरहेको स्थानीयको भनाई छ ।
बर्जु गाउँपालिका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीको निर्देशनमा उनको ड्राइभर शम्भु शर्मा ‘ज्वाला’, अरुण कुमार चौधरी, राजेश चौधरी लगायत १५ जनाको समुहले स्थानीय युवाहरु बुधलाल चौधरी, धर्मजित चौधरी, प्रविण शर्मालाई राजनीतिक आस्थाका कारण कुटपिट गरेका हुन् । शुक्रबार राति ९ः३० बजे भएको घटनामा उल्लेखित युवाहरुको अनुहार तथा शरीरमा चोटपटक लागेको छ ।
बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्षको ड्राइभर शम्भु शर्मा (ज्वाला)ले ‘अर्को पार्टीमा किन गइस ?’ भन्दै हातपात गरेको पिडीत मध्येका एक युवाले बताए । शुक्रबार गाउँपालिकाको हटियापछि अबेर साँझ ४ नम्बर वडा कार्यालयको छेउमा रहेको होटल अगाडी उनीहरुमाथि कुटपिट भएको स्थानीयले बताए । कुटपिटमा संलग्न गाउपालिका अध्यक्षका ड्राइभर शम्भु शर्मा (ज्वाला) हातहतियार तस्कर, चोरी डकैती ठगी, लुटपाटमा समेत संलग्न रहेको र उनलाई गच्छदारले नै संरक्षण गर्दै आएको आरोप छ ।
उनले गाउँमा फरक विचार राख्ने, गाउँपालिकामा भएका विक्रिति विसंगति विरुद्ध बोल्ने युवाहरुलाई धम्क्याउने तथा डर त्रास देखाउने गरेको आरोप छ ।
स्थानीय युवा धर्मजित चौधरीलाई एक्लै पारेर हातपात गरेका उनीहरुले पछि छुट्याउन गएका बुधलाल चौधरी, प्रविण शर्मा लगायतलाई पनि गच्छदारको नाम लिँदै कुटपिट गरेका हुन् । ‘हामी होटलमा बसिरहेका थियौं, शम्भु शर्माले एक्कासी आएर किन अर्को पार्टीमा गइस भन्दै हात हाल्यो ।’ एक पिडित युवाले भने ।
केही दिन अगाडी करिब डेढसय युवाहरु नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता समेत लिइसकेका युवाहरु समेत एमाले प्रवेश गरेपछि गच्छदारका स्थानीय नेताहरु आक्रोशित थिए । गाउँपालिकामा कांग्रेस भन्दा फरक विचार राख्नेहरुलाई दुुव्र्यहार गर्ने, डर त्रास देखाउने कार्य विगतदेखि नै भइरहेको स्थानीयको भनाई छ ।
यता बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीले आफुले कुनैपनि व्यक्तिलाई राजनीतिक आस्थाका कारण डरत्रास नदेखाएको जिकीर गरे । उक्त घटनाको दिन आफु काठमाडौं रहेको भन्दै ड्राइभर शम्भु शर्मा एक हप्तादेखि आफुसँग विदा लिएर सम्पर्क विहिन भएको बताए । ‘मेरो गाडी विग्रिएर ग्यारेजमा छ । ड्राइभर पनि विदामा थियो, उ सम्पर्कमा छैन । घटना के भएको हो बुझिसकेको छैन ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भने ।
घटनामा संलग्न भनिएका शम्भु शर्मा ‘ज्वाला’ ले भने कुटपिट भएको स्वीकार गरेका छन् । आफ्नो बारेमा तथानाम गाली गर्दै हिँडेका थाहा पाएपछि गएर सोधखोज गर्दा सामान्य हातपात भएको उनको भनाई छ । ‘धर्मजितले दुई चारदिन देखि नै मेरो बारेमा तथानाम कुरा गर्दै हिँडेको रहेछ, मैले किन यस्तो गर्छस् भनेर दुईचार लवट हानेकै हो ।’ शर्माले भने ।
केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा विक्रि गरेको भन्दै कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । ओली सरकारमा रहुञ्जेल अख्तियार छल्न गुमनाम बसेका उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको २४ घन्टा नवित्तै विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । विशेषले त्यसैदिन उनलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप वस्न्यात लगायत केहीलाई विशेषले पूर्पक्षमा पठाए पनि गच्छदारले अदालतलाई सेटिङ गरेर कम धरौटीमा रिहा भएको चर्चा छ । त्यसअघि विशेषले गच्छदारका नाममा पटक–पटक म्याद तामेली गरेपनि उनी सम्पर्कमा आएका थिएनन् । कांग्रेस सरकारमा आएसँगै गच्छदारको राजनीतिक पहुँच बलियो भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ मा ‘ताण्डव’ मच्चाउन थालेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीले घटनाका सन्दर्भमा पिडीत पक्षले उजुरी दिएकाे तथा घाउचाेट परीक्षणका लागि काेशी अञ्चल अस्पतालमा पठाइएकाे बताएकाे छ ।
नाेटः बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चाैधरी हुनुपर्नेमा वडाध्यक्ष भएकाेमा सम्पादन गरिएकाे छ । यसबाट पाठकमा पर्न गएकाे भ्रम प्रति क्षमा याचना गर्दछाैं । –सम्पादक
- ३१ श्रावण २०७८, आईतवार १५:१८ मा प्रकाशित